Farsamooyinka Cunnada | July 2021
Shukulaatada kuleylka leh qasab maahan inay noqoto mid dhib badan! Baro sida loo fududeeyo shukulaatada habka ugu fudud, microwave-ka! Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa baaquli iyo heerkulbeeg!
Sida loogu ukumo ukuntaada guriga si loo yareeyo halista cudurada ka dhasha cunnada. Dhejinta ukunta waa wax fudud oo kaliya waxay qaadataa 3 daqiiqo! Ukunta la kariyey waxaa loo isticmaali karaa sida ukunta caadiga ah.
Macallinka martida ah ee Angela Nino oo ka tirsan Sanduuqa rinjiga ayaa baraya sida ay u sameysato midabkeeda midabbada cuntada leh iyo khamriga
Cunto Fondant Madoow
Heerka Xirfadda: Newb Sameynta fondant madow waxay noqon kartaa mid khiyaano leh laakiin cuntadani waxay ku tusi doontaa sida ay u fududaan karto!
Cuntada lagu daweeyo Bariiska Dalagyada Loo Sameeyo Keega La dubay iyo Topperska waa kan cuntadayda aan ugu sameeyo samaynta dalagyada badarka bariiska ah ee loo yaqaan 'toppers' iyo keega la dubay. Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya cuntadan iyo badarka caadiga ah ee bariiska
Recipe Electric Rainbow Fondant Cunto
Cunnooyinka Qaansada Qaanso roobaadka Korontada Ma waxaad raadineysaa inaad hesho qaansoroobaad qafiif ah oo midabbo qurux badan leh? Meel dheer ha fiirin! Cuntadani waxay kuu heli doontaa midabada Lisa Frank ee korantada ah ee aad raadineyso! 6 lbs Sonkor budada ah (la sifeeyay) 3
Kani waa cuntadeyda aasaasiga ah ee gelatin sheet. Waxaan tan ugu isticmaalaa inaan ka sameeyo xumbo gelatin ah, baalal, shiraac, dhaldhalaal la cuni karo iyo waxyaabo kaloo badan!
Sida Loo Sameeyo Ubax Cananaas qalalan
Sidee loo sameeyaa ubaxyo cananaas ah oo la qalajiyey oo xiiso leh! Way fududahay! Waan jeclaa inaan u sameeyo kuwan gabdhahayga xaflad dhalasho mawduucyo Hawaiian ah!
Mar alla markii aad sameysid goos goos ah, waligaa ma isticmaali doontid wax kale. Si fudud aad u fudud in la sameeyo, qaali ah oo ka shaqeeya waqti kasta si aad u hesho keegaaga in laga sii daayo digsiga. Marnaba ha iibsan sii deynta digsiga mar dambe!
Sidee Loo Difaacdaa Qumbaha Qumbaha
Cashar ku saabsan sida loo kariyo qumbaha qumbaha foornada si loogu soo saaro dhadhanka dabiiciga ah iyo nafaqada ee ka yimaada rootiga, oo la mid ah lowska la dubay.
xagee ka heshaa baraf jaceyl
sida loo sameeyo ubaxyo ubax ah kuwa bilowga ah
sida loo sameeyo bears gummy
sida loo sameeyo keeg la dubay oo qoyan